Mgbochi Ejiri Iguzogide Ntụte Ihe Ntuchi Uche China Manufacturer
Nkọwa:Ogwechi Mkpuchi Kwadoro,Ogwe ọnụ ụzọ mgbochi,Okwute Udo Ogbo
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ụlọ Ọrụ Mmebe Ụlọ Ọrụ > Mgbochi Ejiri Iguzogide Ntụte Ihe Ntuchi Uche
Mgbochi Ejiri Iguzogide Ntụte Ihe Ntuchi Uche
Ihe Nlereanya.: HF-E1003
Nkwakọ ngwaahịa: ihe nchịkọta osisi
Dock Leveler / Dock Leveler / Dock Loading / Dock / Ramp / Dock Shelter / Dock Seal
1. Ịchapu gburugburu ebe obibi site n'èzí, ọ bụghị naanị uru maka ọnọdụ ọrụ. Izere ihe mkpofu na-abaghị uru pụtakwara ike ịzọpụta, nchedo gburugburu ebe obibi, nchebe nke ngwaahịa na ịrụ ọrụ arụmọrụ ka ukwuu.
2. Ụlọ nche ezumike na-echebe ebe obibi dị ọkụ dị n'ime ụlọ site na ọnọdụ oyi na-atụghị anya, ndị na-adịghị ahụ ọkụ si n'èzí, na ihe niile si na mmiri ozuzo, ifufe, snow, ájá.
3. Mma dị mma, ụdị dị iche iche dị iche iche na-eme ka ha ghara ịchọta nkwụsị nke ụgbọala ndị ahụ, na-ebelata mmetụta ha n'ụzọ dị iche iche: site na ụlọ ndị nwere ike iweghasị ọrịa ahụ (ụlọ akwụkwọ ntanetị a na-atụgharị anya), na-eji nri polyurethane (ebe nchekwa nri)
Ụlọ ntanetị akwa:
Ụkpụrụ ọkọlọtọ na-echekwa ebe obibi kachasị ama ma jiri ya. n'ihi na ọ dị mfe, ọnụ ala na arụmọrụ, ọ na-enye maka ịkwụghachi ụgwọ ego mgbe niile.
Enweta maka nhazi ọkwa nkwụsị, ma ọ bụ maka nhazi ọkwa ala maka nchebe nke ọnụ ụzọ na-enweghị ọdụ ụgbọ mmiri
Ngwongwo ndochi ebe obibi:
N'ihi nnukwu ihe mkpuchi ya, ebe obibi ụgbọ mmiri ahụ bụ ezigbo ngwọta maka okpomọkụ a na-achịkwa.
Ndị ahụ na-akwado nrụgide ụgbọ ala ma na-ekpuchi akụkụ atọ ahụ, gụnyere ohere dị n'agbata n'azụ azụ na azụ nke igbe ụgbọ. Okwesiri maka ikpuchi ikuku nke oke oyi. Nke a na - eme mgbe nrụzi mmepụta ụlọ na ụgbọala dị iche iche na - ejikwa ya tụnyere nke n'èzí.
Ebe nchekwa ụgbọ mmiri:
Ịnye nri nke oyi ma ọ bụ nke kpọnwụrụ akpọnwụ na-etinye ihe dị elu n'elu ígwè okpomọkụ. Ụlọ ntanetị nwere ike ịnweta akara kachasị mma nke ebe a na-achịkwa ọnọdụ mgbe ị na-ebugharị ma na-ebudata. N'adịghị ka ụdị ụlọ nchebe ndị ọzọ, ụgbọala ahụ adịghị agbanye ụlọ ahụ. Kama imebi ebe obibi ahụ gburugburu ụgbọala ahụ a kwụsịrị, na-enye akara zuru oke. Ụlọ na-adaba adaba maka nha ụgbọala niile na ikike akara ha karịrị nke ọkọlọtọ ndị ọrụ na-achọkarị.
ulo oru mmepe ulo onu Kpọtụrụ ugbu a
Oghere ọkụ na-aga n'ihu Kpọtụrụ ugbu a
Oghere Ulo Okwusiri Ogige Nkeji Ahu Ulo Kpọtụrụ ugbu a
onu ogugu onu ozo maka uzo Kpọtụrụ ugbu a
Ogige Garage na-echekwa onwe gị na Ogwe na Aluminom Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ mpempe ụzọ maka ikpuchi Ọnụ ụzọ ụgbọala na-arịgo Kpọtụrụ ugbu a
Ntughari nke ihe eji eme ihe n'ilekọta ndochi ngbochi Kpọtụrụ ugbu a
Dock Leveler / Dock / Ramp / Dock Shelter / Dock Seal Kpọtụrụ ugbu a
Ogwechi Mkpuchi Kwadoro Ogwe ọnụ ụzọ mgbochi Okwute Udo Ogbo Oghere Mkpuchi Mkpuchi Ogige Mkpuchi Mgbidi Ịgbachi mkpuchi Dock Oghere Mkpuchi Nchekwa Ikuku Ogwe Nchekwa Akpaka Nchekwa